यस्तो पो छ कलाकार नेताको कुरो ! रेखा एमाले र करिश्मा माओवादी केन्द्र पछ्याउदैँ
काठमाडौं, २५ असोज । प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन यही आउने मंसिर १० र २१ गते हुँदैछ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु चुनाव आउनु एक महिना अघिदेखि नै विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउन तछाँडमछाँड गरेर लागिपरिरहेका छन् ।
यसो त अहिले राजनीतिक ध्रुवीकरण हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ती नेपालवीच चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको प्रयास भएसँगै झनै राजनीति ध्रुवीकृत बनेको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिवेला विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु भित्र्याउन सक्रिय भएर लागेका छन् । सोही अनुसार उनले अहिले प्रसिद्ध कलाकारहरुलाई आफ्नो पार्टीमा ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् ।
नयाँ शक्ति नेपालकी केन्द्रिय सदस्य समेत रहेकी चर्चित नायिका करिश्मा मानन्धर प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने तरखरमा छिन् । उनले संभवत २,४ भित्रै पार्टी प्रवेश गर्ने बुझिएको छ ।
राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य गायिका कोमल वली यसअघि नै एमालेमा प्रवेश गरिसकेकी छिन् । राप्रपाको निर्वा्चित केन्द्रीय सदस्य रहेकी कोमल एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको हातबाट टीका लगाएर एमालेमा प्रवेश गरेकी हुन् । यस्तो पो छ कलाकार नेताको कुरो ! रेखा एमाले र करिश्मा माओवादी केन्द्र पछ्याउदैँ रंगकर्मीहरु बिच ब्यापक चर्चा चलेको छ ।
खदाङ–त्रिवेणी सडक अवरुद्ध
त्रिपुरासुन्दरीमा चुँडिएको पुल